Qaraxyo Sababay khasaare oo Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho – SBC
Qaraxyo Sababay khasaare oo Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho
Posted by Webmaster on Noofember 30, 2011 Comments
Qaraxyo is xig xigay islamarkaana siweyn looga maqlay ayaa saaka iyo Barqo nimadii Maanta ah ka dhacay Magaalada Xarunta u ah Dalka ee Muqdisho.
Qaraxyadaasi ayaan ilaa iyo iminka la aqoon qaarkood khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay waxaana ay u ekaayeen kuwo ismiidaamin ah islamarkaana ay fuliyeen sida warbaahinta DKMG ah ay sheegtay rag ka tirsan xoogaga Xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Qaraxyadaasi ayaa mid ka mid ah waxa uu ka dhacay Degmada Dharkinley ee Magaalada Muqdisho waxaana sida la xaqiijinayo ku nafwaayay qaar ka tirsan Haweeyn olole nadaafadeed fulinayay .
Qarax kale ayaa isna waxa uu ka dhacay Vila Baydhabo Muqdisho waxaana qaraxaasi lala eegtay Sarkaal sare oo ka tirsan Nabad sugida DKMG ah waxaana qaraxaasi ku dhintay askar ka tirsan DKMG ah oo sida ay xaqiijiyeen saraakiisha xukuumada Nabad sugida ay tiradoodu gaareyso 4 Askari.
Qaraxyadan Maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay dowlada KMG ah dusha u saarisay Xarakada Shabaab Almujaahidiin oo dowlada KMG ah dagaal dhinac walba ah kula jirta, Manajiraan wax war ah oo ay xarakada Shabaab ku sheeganeyso Qaraxyadan.
SBC International Niarobi